विश्वकप फुटबलमा जितको इतिहास ! « रंग खबर
विश्वकप फुटबलमा जितको इतिहास !
हामीले एजेन्सीको सहयोगमा विभिन्न देशले विभिन्न समयमा जितेका ती संस्करणहरुलाई वर्गिकरण गरेका छौँः
विश्वकप फुटबलको इतिहासमा दुई देशले लगातार विश्वकपको उपाधि उचालेका छन् । दुई देश इटाली र ब्राजिलले लगातार विश्वकप जितेका छन् ।
इटालीले सन १९३४ र १९३८ मा लगातार विश्वकपको उपाधि हात पारको थियो । सन १९३४ मा आफ्नै देशमा आयोजना भएको विश्वकपमा फाइनलमा अतिरिक्त समयमा चेकोस्लोभाकियालाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो भने सन १९३८ मा फ्रान्समा आयोजना भएको विश्वकपको फाइनलमा हंगेरीलाई ४–२ गोल अन्तरले पराजित गरेर उपाधि हात पारकेको थियो ।
त्यसपछि विश्वकप आयोजक अर्जेन्टिनाले घरेलु मैदानमा सन १९७८ को विश्वकप जितेको थियो । सो विश्वकपको फाइनलमा अर्जेन्टिनाले नेदरल्याण्डसलाई अतिरिक्त समयमा ३–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो ।
त्यस्तै आयोजक जर्मनीले सन १९७४ को विश्वकप उपाधि जितेको थियो । जर्मनीले सो फाइनलमा नेदरल्याण्डसलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै विश्वकपको उपाधि जितेको थियो ।
त्यसपछि आयोजक फ्रान्सले सन १९९८ मा विश्वकपको उपाधि जितेको थियो । फाइनल खेलमा फ्रान्सले ब्राजिललाई ३–० गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो ।
सन १९३० मा उरुग्वेमा भएको पहिलो विश्वकपदेखि २०१४ मा ब्राजिलमा भएको पछिल्लो विश्वकपसम्म आइपुग्दा २० पटक विश्वकप आयोजना भएको छ । रसियामा यो पटक २१औ विश्वकप संस्करण जुन १४ देखि जुलाई १५ सम्म हुदै छ ।
विश्वकपको २१औँ पटकको यो यात्रासम्म आइपुग्दा ८ वटा देशले मात्रै विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेका छन् । ती विजेता देशहरु ब्राजिल, जर्मनी, इटाली, अर्जेन्टिना, उरुग्वे, फ्रान्स इङल्याण्ड र स्पेन हुन् ।